Tilmaamaha bilaashka ah ee Adobe Illustrator: CS3, CS4, CS5, CS6 iyo CC | Abuurista khadka tooska ah
Fran Marin | | muujiye, dhowr
Subax wanaagsan, asxaabta naqshadeeye, fursad kasto… miyaadan raadineynin buugga Isbaanishka ee AI? Hadday sidaas tahay, waad nasiib badan tahay, maxaa yeelay maanta waxaan go'aansanay inaan wadaagno isku-dubbarid wax kuu tari kara. Waxaan u soo bandhigeynaa qalab aad u xiiso badan dhammaan kuwa isticmaala kuwaas oo laga yaabo inaysan si qoto dheer u aqoon korontada ama howlaha barnaamijkani bixin karo. Kuwani waa buuggaag ku qoran Isbaanishka noocyada CS3, CS4, CS5, CS6 iyo CC. (Buugga QC wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa nooca CS6). Adobe Illustrator (AI) waa halbeegga loogu talagalay naqshadeeyayaasha si ay u abuuraan halabuur iyadoo la adeegsanayo sawirada vektorka (in kastoo aan u maleynayo inaad taqaanid), waxaana loogu talagalay abuurista farshaxanka ee sawirka iyo rinjiyeynta sawirka (labadaba sawirka iyo laanta farshaxanka dhijitaalka ah ee lagu dabaqay sawirka farsamada iyo naqshadeynta garaafka, iyo kuwo kale).
Waan ognahay inay xanuun tahay in la raadsado buugag gacmeedyo ku qoran Isbaanishka, taasi waa sababta aan halkan ugu soo bandhignay a isku duwidda noocyada ugu isticmaalka badan.
Si aad u awoodo inaad soo dejiso waxyaabaha ku jira, waxaad kaliya u baahan tahay inaad gujiso xiriirka noocaaga ah ee Adobe Illustrator isla markaana aad u hesho soo-dejinta tooska ah iyo bilaashka ah ee buuggeeda gaarka ah (xiriir buuxa oo ku lifaaqan haddii ay jirto qalad sida ay u dhacday marar kale ). Aynu ku raaxaysanno! Haddayna dhibaato jirto, ila soo socodsii.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » muujiye » Buugga Adobe Illustrator ee bilaashka ah: CS3, CS4, CS5, CS6, CC
federaal tepman dijo
Waad salaaman tihiin. cs6 buuga waa la la'yahay
Ku jawaab fede tepman
Xidhiidhyadu mar dambe ma shaqeeyaan ...
Luis wanaagsan! Xidhiidhyada ayaa mar hore la soo galiyay ... Hada haa! Ku raaxayso iyaga, salaan.
Subax wanaagsan ... Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirintaada, laakiin xaqiiqdii dhibaato ayaa ka jirta iskuxirka CC. Si kale oo loo maro buug-gacmeedka? Salaan!
Ku jawaab Elo
Waad salaaman tahay Elo, waxaan badalay xiriiriyeyaasha… haddii ay dhibaato jirto nala soo socodsii, salaan!
XFAVOR ISKU DIYAARISTA IN LAGA QABO QAABKA AY KU XIRAN YAHAY WAA QAARO AAD U xiiso badan
Tabalatas! Waxaan kaaga digayaa in dhibaatadii la xaliyay, hadii ay jiraan wax qaladaad ah ila soo socodsii, raaxee!
Dhammaan xiriiriyeyaasha waxay bixiyaan qalad. Waad ku mahadsantahay soo galinta.
Ku jawaab Jone
Wax walba waa la xaliyay Jone! Waan ka xumahay dhibaatadan waana la soo dhaweynayaa, waxaan rajeynayaa inay ku caawin doonto!
Ale Danny dijo
shuqullo aad u fiican .. wax ku biir aad u wanaagsan
Jawaab Ale Dany
Waad salaaman tihiin mid ma soo raadin kartaa CS6 fadlan?
Victor Waxaad Tahay Capo dijo
waad ku mahadsan tahay tabarucaadka
Jawaab Victor Sos Un Capo
Aad baad ugu mahadsantahay wax ku biirinta…